Arzantina: Naneho Hevitra Momba Ny Fanomezana ny Orinasa YPF Ho Tantanin’ny Fanjakana Ny Mpamahana Bolongana · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Naneho Hevitra Momba Ny Fanomezana ny Orinasa YPF Ho Tantanin'ny Fanjakana Ny Mpamahana Bolongana
Nandika (en) i Jorge Gobbi
Voadika ny 20 Avrily 2012 2:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Português, Filipino, Español
Niteraka sahoan-dresaka teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Arzantina ny fanambarana fa omena ho tantanin'ny fanjakana ny orinasa mpamokatra solika YPF, izay fehezin'ny Repsol Espainola, sy ny famindrana ny 51%n'ny renivola ho an'ny govermanta Arzantina. Amin'ny ankapobeny, rehefa misy ny lohahevitra resahina ao Arzantina, mizarazara ny hevitra eo amin'ny mpanohana sy ny mpanohitra ny governemantan'i Cristina Fernandez de Kirchner.
Tao amin'ny bilaogy mpanohana an'i Kirchner ArtePolítica, nilaza i Sebastian fa henatra ho an'ny firenena ny “Repsol-YPF” ka hoy izy nanazava:
El modelo Petrobras parece a priori el más adecuado: capital mixto y parte en la bolsa, gestión muy profesionalizada, y control accionario mayoritario por parte del estado nacional y de las provincias petroleras.
Ny modely Petrobras [orinasa Breziliana mpamokatra angovo sady tantanin'ny fanjakana no tantanin'ny tsy miankina] no toa hita fa tsara ampiharina: orinasa mahaleotena ary mipetraka any amin'ny tsenam-bola ny ampahany amin'ny renivola, fitantanana azo antoka, ary ny fanjakana sy ny faritany mpamokatra solitany no mitana ny ampaham-bola be indrindra.
Namoaka fanambarana nofantenina avy amin'ireo mpanao politika sy ny mpanao gazety tsy mankato ny fepetra noraisina ny IndiePolitik ka ahitana esoesonteny tahaka ity fanontaniana ity,
¿Qué dudas caben de que la expropiación de YPF es una medida, además de histórica, correcta, si los que se oponen son el FMI, Macri, Carrió, La Nación, la UCR dependiente, De Narváez y Clarín?.
Inona no mampisalasala raha toa ka fepetra ara-drariny sy manatantara ny fangalana ny orinasa YPF, fantatra anefa fa manohitra ny fepetran'ny FMI, Macri, Carrio, The Nation, ny UCR dependent, De Narváez sy Clarin?.
Ny bilaogin'ny Agenda Digital, avy amin'ny sampam-pahalalam-baovao ofisialy Telam, namintina ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter.
Niadian-kevitra tao amin'ny Saber Leyes no es Saber Derecho ny vokadratsy sasantsasany amin'ny fanomezana ny orinasa hotantanin'ny fanjakana, indrindra eo amin'ny fomba famakiana ny volavolan-dalàna nalefan'ny filoha tany amin'ny Kongresy, izay anatin'ny fifandresen-dahatra indrindra amin'izao fotoana izao.
Sary avy amin'ny mpisera Flickr Christian Córdova (CC BY 2.0)
Nomarihan'ny Economía Posible fa nitsontsorika be ny famokarana nandritra ny fitondran'i Kirchner, ary nanontany koa izy hoe “ny tompon'andraikitry ny politikan'ny angovo nandritra izay sivy taona izay ihany ve no nilaza fa “hamonjy antsika”.
Tamin'ireo bilaogy manana fifandraisana amin'ny Union Civica Radical (Radical Civic Union), antoko politika nentim-paharazana Arzantina izay ao anatin'ny mpanohitra amin'izao fotoana, nanambara i Hernán Haynes fa ny fanomezana ny orinasa YPF ho an'ny fanjakana dia mifanohitra tanteraka amin'ny lalampanorenana Arzantina.
Manontany tena i Eduardo Soler ao amin'ny Comunicación Ambiental ny amin'ny tsy nanasiana resaka momba ny angovo madio [tsy mandoto] nandritra ny fotoana nanambarana ny fanomezana ny orinasa ho an'ny fanjakana nefa nolazaina ny “solika tsy manara-penitra” izay matetika ilàna teknolojia avo lenta ny fitrandrahana azy.
Farany, manadihady ny tranga ao anatin'ny fiovana maro eo amin'ny rafitra ara-toekarena noho ny fisondrotan'i shina sy ny firenena an-dalampandrosoana ny Vaca.org, raha mijery ny any ankoatran'ny fiantraikan'ny fanomezana ny orinasa YPF hotantanin'ny fanjakana ao Arzantina.